the safety of your deposit!
REASONABLE LOAN PAYMENT TERMS & INTEREST!
For all people to live in peace and dignity with happiness and joy.
Ante pharetra posuere blandit aliquam fusce sollicitudin.
Lacinia nisl accumsa sceleris phasellus venenatis don,
Etiam sollicitudin sagittis justo at ullamcorper potenti.
To realize the potential for financial resources towards the development of construction, urban and housing sector and to enable the citizens to haveachance to ownahouse through increasing capital, the integration of the government’s responsibility public’s deposits and shares.
For all people to gain and sustain to live in peace and dignity with happiness and joy.
USD, EURO, SGD Currency များအား အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ Money Changer Location Money Changer, D...
နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် CHID Bank အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာတွင် အဆက်အသွယ်ဘဏ်များထူထောင်ခြင်...
နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းဌာန၏ ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထား/ သတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ IBD Bank Commission &amp; Charges
L/C, Bank Guarantee, Tarde Payment များအတွက် Collateral Basis ဖြင့် Financing Facility ထုတ်ပေးခြင်းများလည်းဆောင...
နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုဆောင်ရွက်နေသော L/C, Bank Guarantee, Trade Payment များအတွက် ငွေကြ...
Inward Remittance Required Documents Application Letter Bill of Lading/ Import Declaration Bank Co...
အတိုးနှုန်းသက်သာသော အိမ်ရာချေးငွေစနစ်ဖြင့် အိမ်ခန်းများ ၀ယ်ယူနိုင်ပါပြီ
ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်
ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်
MONEY CHANGER CORRESPONDENT BANKS BANK COMMISION & CHARGES TRADE FINANCING FACILITY TRADE TRANSACTIONS FOREIGN REMITTANCE
ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ (၁၈)ခုမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲကို (၁၇.၅.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁၃၇) ၊ အနောက်မြ...
ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ (၁၇)ခုမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲကို (၁၅.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ယနေ့တွင် တိုက်အမှတ်-၅၊ မ...
ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ရုံးချုပ်ရှိ တာဝန်ရှိလူကြီးများမှ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းများသို့ သွား...
(၂၃.၉.၂၀၁၉) နေ့ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနား
(၂၃.၉.၂၀၁၉) နေ့တွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး အိမ်ရာနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ၊ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဘ...
(၂၉.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အိမ်ရာစီမံကိန်းများ ရောင်းချရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကော်မတီမှ တတိယအသုတ် တန်ဖိုးနည်း/တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာရောင်းချမှ...
CHIDB MPU Debit Card အသုံးပြုသူများသို့
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA) သို့ Company Registration Number အတွက်ငွေပေးသွင်းရာတွင် Customer များမှ နှစ်ကြိမ်ပေးသွင်းမ...
ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ (၁၆)ခုမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော လွိုင်ကော်ဘဏ်ခွဲကို(၁၈.၁၂.၂၀၁၉) ရက်နေ့၊ ယနေ့တွင် အမှတ်-၇၅(မ)၊...
ဆဋ္ဌမ အကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး ကျင်း...
( ၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ) ရက်နေ့ နံနက် ၉:၀၀ နာရီ တွင် ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးကိ...
ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ (၁၈)ခုမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော တောင်ကြီးဘဏ်ခွဲကို (၁၇.၅.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁၃၇) ၊ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ စဝ်စံထွန်းရပ်ကွက် ၊ နယ်မြေ(၁၀) ၊ တောင်ကြီးမြို့၌ အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ပြီး ဖြစ်ပါ၍ တောင်ကြီးမြို့နယ်ရှိ မိတ်ဆွေများအားဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ ကို ယုံကြည်စွာဖြင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး၊ အိမ်ရာ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ (၁၇)ခုမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော လှိုင်သာယာဘဏ်ခွဲကို (၁၅.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ယနေ့တွင် တိုက်အမှတ်-၅၊ မြေညီထပ်၊ ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာ စီမံကိန်း၊ အပိုင်း-၂၊ ၁ခန်းတွဲ ၄ထပ်၊ Shop House၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ၌ အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ပြီး ဖြစ်ပါ၍ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မိတ်ဆွေများအားဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ ကို ယုံကြည်စွာဖြင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။